रुकुममा छोरीले बुवाआमाको किरिया गरेपछी……. — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, समचार → रुकुममा छोरीले बुवाआमाको किरिया गरेपछी…….
रुकुममा छोरीले बुवाआमाको किरिया गरेपछी…….
April 29, 2016३०६ पटक
रुकुम १७-बैशाख / मृत्यु पश्चात् मलामीहरु पनि महिला जान लागे भन्ने खबरहरु बेलाबखत बाहिर आउँछन तर महिला नै काजक्रीयामा बसेको समाचार अझै पनि अनौठो नै मानिन्छ।
हिन्दु संकार अनुसार कुनै ब्यक्तिको मृत्यु भएका कित उसका छोरा या छोरा नभएमा बाहिरका अन्य कुनै पुरुष मान्छेहरु नै किरिया गर्ने चलन छ।
महिलाले किरियाकाज गर्ने त परको कुरा नर्क जान्छन भनेर मृत्यु पश्चात लास समेत छुन दिईदैन । तर रुकुमकी एक महिलाले भने आफ्नै बुवाआमाको काज किरिया गरेकी छिन ।
रुकुम जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका ६ सेरीगाउँ बस्ने बर्ष २१ कि नितु गौतम आमाको मृत्यु पश्चात किरिया बसेकी हुन ।
आमा लक्ष्मी गौतमको यहि बैशाख १ गते मृत्यु भएको थियो । नितु कान्छी बहिनी हुन भने उनका कल्पना,सुरेसा, कविता र पबिता गौतम पनि छन । दाजुभाई नभएकी नितु यस अघि पनि १६ बर्षको उमेरमा मृत्यु भएका बुवा ओम प्रकास गौतमको पनि किरिया बसेकी थिईन ।
छोराछोरी जुनसुकै भएपनि बुवाबुवाका सन्तान भएको बताउदै छोरा नभएका आमाबुवाको काजकिरिया पनि छोरीहरुले पनि गर्न सक्छन र गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन आफु किरिया बसेको उनले बताईन । आमाको किरियाकाज गरेर महिलाहरुले पनि आमाबुवाको किरियाकाज गर्न सक्छन भन्ने गतिलो उदाहरण दिएको महिला अधिकारकर्मी भुपेन्द्रा मगर बताउछिन ।
‘हाम्रो समाजमा छोरिले किरिया गर्नु हुदैन भन्ने अन्धविश्वासलाई नितुले तोडनु भएको छ’ मृतकका घरमा समबेदना साट्न गएकी मगरले भनिन, ‘यदि स्वर्ग छ भने छोरीले गरेको काजकिरिया मार्फत पनि मृतक स्वर्ग जान सक्छन, यस्तो साहासिक कार्य गर्ने गौतम परिवारलाई र विशेष नितुलाई उहाँकै घरमा पुगेर हामीले हौसला दिएका छौं ।’
महिला किरिया बसेको खबर सुनेपछि हौसला दिन अन्तर पार्टी महिला संजालकी पुर्ब अध्यक्ष देबी ओली र महिला मानव अधिकार रक्षक संजालकी अध्यक्ष कल्याणी खडका लगायतका महिला अधिकारकर्मीहरु पनि त्यहाँ पुगेका थिए । छोरी कृया बस्न हुंदैन भन्ने हिन्दु संस्कारलाइ तोड्दै महिलाले गरेको यो काजक्रीयाको रुकुमका अधिकारकर्मिले स्वागत गरेका छन।